तलब Archives - Lokpati.com
Tag - तलब
काठमाडौं। सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। सम्बन्धित देशको न्यूनतम तलब अनुसार नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री...
काठमाडौं, ३१ भदौ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्ना कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। भदौ १७ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो।
समितिले निर्देशकको हकमा १८, प्रबन्धकको हकमा १९ र बाँकी...
अदालतका कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं, ११ भदौ। सरकारले अदालतका कर्मचारीको तलब बढाएको छ। नेपाल सरकारको भदौ ४ गतेको निर्णयले न्यायालयका कर्मचारीको तलब तोकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च...
वडाध्यक्ष कुँवरले बाँडे वर्षभरीको तलब वृद्धवृद्धालाई
कञ्चनपुर, ५ साउन। कञ्चनपुरमा एक जना जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको वर्षभरीको तलब वडाका वृद्धवृद्धालाई वितरण गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष आशेफ कुँवरले आफूले पाएको २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वडाका वृद्धवृद्धालाई वितरण...
सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब बढ्यो, कसको कति ?
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा राजपत्र अनंकित (सुब्बासम्म) को २० प्रतिशत र राजपत्रांकित (अधिकृत र सोभन्दा माथि) का...
बैंक / बित्त • स्पेशल
बजेट अनुसार कति बढ्यो प्रहरीको तलब ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, १६ जेठ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक (सरकारी) कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
सरकारले राजपत्रअनंकित श्रेणीका कर्मचारीको २० र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीको १८ प्रतिशत तलब...
मन्त्रीपरिषदद्वारा तलब बृद्धिको घोषणा
माघ ४ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गरिदिएको छ । सुडानको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो ।
सुडान वकर्स ट्रेड युनियन फेडेरेसनले झण्डै पाँच...
काठमाडौं, २७ पुस । संसद्का पदाधिकारी र सांसदका स्वकीय सचिव (पिए)को तलब अब उनीहरूकै बैंक खातामा जाने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले पुसदेखि स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब कट्टा गरी सांसद तथा पदाधिकारीको तलब पठाउने भएको हो । यो...
क्रिकेट खेलाडीको रोकिएको तलब आउने, कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)को विशेष पहलमा विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको पारिश्रमिक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीले पाउने भएका छन् ।
साधारणसभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघमा...
स्वकीय सचिव छैनन्, तलब सांसदको खल्तीमा
काठमाडौं, १८ पुस । रूपन्देहीबाट निर्वाचित भरतकुमार शाह असोज ५ मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यही महिनादेखि संसद् सचिवालयले उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय...